မိတ်ကပ်မပါလည်း ပကတိအတိုင်းလေး လှတဲ့ ဘောလိဝုဒ် မင်းသမီး (၇) ယောက် - For her Myanmar
မိတ်ကပ်မပါလည်း ပကတိအတိုင်းလေး လှတဲ့ ဘောလိဝုဒ် မင်းသမီး (၇) ယောက်
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သူများ ပါမလား ကြည့်ကြည့်နော်…
ဒီခေတ်ကြီးမှာ ဘယ်အရာကမှ မယုံရဘူးလေနော်.. မိတ်ကပ်အစွမ်းကလည်း အံ့မခန်းဆိုတော့ကာ ကိုယ်က လှတယ်ထင်ခဲ့ပေမဲ့ မိတ်ကပ်ဖျက်လိုက်တော့မှ ဟာခနဲ ဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်ပေါင်းကလည်း မနည်းမဟုတ်လား… အထူးသဖြင့် မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေဆို ပိုဆိုးတာပေါ့နော်… မိတ်ကပ်ပြောင်းရင် ပြောင်းသလို ရုပ်ပါ လိုက်ပြောင်းတော့ တကယ့်တကယ် မိတ်ကပ်မပါတဲ့အခါရော မြင်နေကျလို လှနိုင်ဦးမလား စဉ်းစားစရာပါပဲ:D မိတ်ကပ် လိမ်းထားတဲ့ ရုပ်နဲ့ မျက်နှာပြောင် ယှဉ်တွဲထားတဲ့ တကယ့်ပုံ မြင်ရမှပဲ သြော်.. သူက ပကတိ ချောလှပါလား ဆိုပြီး စိတ်ကို ဒုံးဒုံးချယုံရမလိုလို ဟီးဟီး…
အဲဒီလို စပရိုက်တွေတိုက်နေကျ မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေထဲကမှ ဘောလိဝုဒ် မင်းသမီးတွေ ဘက် တစ်ချက်သွားကြည့်ကြရအောင်နော်…
၁။ Deepika Padukone
အချစ်လေး ဒီပီကာကတော့ ဘာမှ မလိမ်းမခြယ်ဘဲ ပုံမှန်အတိုင်းလေး နေရင်တောင် ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေပါတယ်နော်။ မိတ်ကပ်လိမ်းထားတဲ့အခါ တစ်မျိုးလေးလှပြီး ဘာမှမလိမ်းထားတော့လည်း အဆင်ပြေပြေ၊ ကြည်ကြည်ရှင်းရှင်းလေး လှတာပေါ့လို့…
၂။ Priyanka Chopra
ချိုပရာကတော့ အိန္ဒိယမှာတင် မကဘူး International ထိ ကျော်ကြားတဲ့သူပေါ့.. တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပရိသတ်တွေရဲ့ အသဲနှလုံးကို အပိုင်သိမ်းထားတဲ့သူဆိုလည်း မမှားပါဘူး (သူ့အသည်းနှလုံးကိုတော့ Nick ကအပိုင်သိမ်းထား 😛 ) ။ မိတ်ကပ်တွေ မပါတာတောင်မှ နဂိုတိုင်းလေး လှနေတာမျိုးလေး…
၃။ Alia Bhatt
သူလေးကတော့ မိတ်ကပ်တွေ ဘာတွေ တစ်ခုမှ မလိမ်းခြယ်ထားတဲ့ မျက်နှာပြောင်ပုံတွေကို IG မှာ တင်လေ့ရှိပါတယ်။ Highway ဇာတ်ကားထဲမှာဆိုရင် သူ(မ)ရဲ့ သဘာဝအလှလေးတွေကို ပရိသတ်တွေက တဝကြီး ခံစားလို့ ရခဲ့တာလေ.. ပါးချိုင့်လေးနဲ့ ပြုံးလိုက်ရင် မိတ်ကပ် ပါပါ၊မပါပါ ရင်သပ်ရှုမောပါပဲနော်..
Related Article>>> ဘောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တို့ရဲ့ ဝိတ်ချနည်းများ
၄။ Sonam Kapoor
ဒီမင်းသမီးကတော့ အပြုံးအလှပိုင်ရှင် ဖြစ်သလို ဖက်ရှင်ဘုရင်မလို့လည်း တင်စားလို့ ရပါတယ်။ မျက်နှာပြောင်နဲ့ဆိုလည်း အားလုံးထဲမှာ အထင်သားလှနေပြီး မိတ်ကပ်တွေ ဘာတွေ ခြယ်သလိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ wow ပေါ့။
၅။ Karishma Kapoor
ဒါကတော့ နောက်ထပ် ဂန္ထဝင်အလှနဲ့ Kapoor တစ်ယောက်ပေါ့ 😀 မျက်လုံးအရောင်က အိန္ဒိယမျက်လုံးလို မျက်ဆံနက်နက် မလာဘဲ အနောက်တိုင်းသားတွေလို မျက်ဆံနဲ့ အသားအရောင် ဖျော့တော့တော့ ရှိပြီး မိသားစုထဲမှာ အထူးခြားဆုံးပါတဲ့။ မိတ်ကပ်ပါသည်ဖြစ်စေ မပါသည်ဖြစ်စေ ဘယ်လိုနေနေ လှနေတာတော့ အံ့သြစရာ မဟုတ်ဘူး ထင်ပါရဲ့နော်…
၆။ Kareena Kapoor Khan
ဒီမင်းသမီးကိုတော့ မြန်မာပရိသတ်တွေ ကောင်းကောင်းကြီး သိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဟိုးအရင် ၉၀ ကျော်ကတည်းက နာမည်ကြီးမင်းသမီးတစ်လက်ပေါ့။ Kapoor ကိုတော့ မိတ်ကပ်မလိမ်းတာတောင် နတ်သမီးလေးတစ်ပါးလို လှတယ်ဆိုပြီး တင်စားကြပါတယ်။ သူ့ခေတ်သူ့အခါတုန်းက ဖက်ရှင်ကွင်းပေါ့… ဒီကြားထဲ တော်တော်လေး ဝသွားပြီး ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ယောဂဆော့ပြီး ကျန်းမာစေတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှု ပုံစံကို ပြန်ထိန်းထားပါတယ်တဲ့… ပြန်လှနေပြီ ခုတော့ <3
၇။ Disha Patani
Kung Fu Yoga နဲ့ Ms Dhoni ထဲမှာ ပါတဲ့ မင်းသမီးလေး Disha ကတော့ လှပတဲ့ အပြုံးပိုင်ရှင်လေး ဖြစ်တာကြောင့် သူ့အပြုံးတွေမှာ မျောသွားတဲ့သူ များပါတယ်။ မိတ်ကပ်မလိမ်းတာတောင်မှ မိတ်ကပ်လိမ်းထားသယောင် ထင်ရတဲ့ သူလေးပေါ့…
ယောင်းတို့ရော ဒီထဲက ဘယ်မင်းသမီးကို အချစ်ဆုံးလဲ???
Reference: stylecraze, bollywoodstars
ကိုယျကွိုကျတဲ့သူမြား ပါမလား ကွညျ့ကွညျ့နျော…
ဒီခတျေကွီးမှာ ဘယျအရာကမှ မယုံရဘူးလနေျော.. မိတျကပျအစှမျးကလညျး အံ့မခနျးဆိုတော့ကာ ကိုယျက လှတယျထငျခဲ့ပမေဲ့ မိတျကပျဖကျြလိုကျတော့မှ ဟာခနဲ ဖွဈသှားခဲ့ရတဲ့ အဖွဈပေါငျးကလညျး မနညျးမဟုတျလား… အထူးသဖွငျ့ မငျးသား၊ မငျးသမီးတှဆေို ပိုဆိုးတာပေါ့နျော… မိတျကပျပွောငျးရငျ ပွောငျးသလို ရုပျပါ လိုကျပွောငျးတော့ တကယျ့တကယျ မိတျကပျမပါတဲ့အခါရော မွငျနကေလြို လှနိုငျဦးမလား စဉျးစားစရာပါပဲ:D မိတျကပျ လိမျးထားတဲ့ ရုပျနဲ့ မကျြနှာပွောငျ ယှဉျတှဲထားတဲ့ တကယျ့ပုံ မွငျရမှပဲ သွျော.. သူက ပကတိ ခြောလှပါလား ဆိုပွီး စိတျကို ဒုံးဒုံးခယြုံရမလိုလို ဟီးဟီး…
အဲဒီလို စပရိုကျတှတေိုကျနကြေ မငျးသား၊ မငျးသမီးတှထေဲကမှ ဘောလိဝုဒျ မငျးသမီးတှေ ဘကျ တဈခကျြသှားကွညျ့ကွရအောငျနျော…
အခဈြလေး ဒီပီကာကတော့ ဘာမှ မလိမျးမခွယျဘဲ ပုံမှနျအတိုငျးလေး နရေငျတောငျ ဆှဲဆောငျမှု ရှိနပေါတယျနျော။ မိတျကပျလိမျးထားတဲ့အခါ တဈမြိုးလေးလှပွီး ဘာမှမလိမျးထားတော့လညျး အဆငျပွပွေေ၊ ကွညျကွညျရှငျးရှငျးလေး လှတာပေါ့လို့…
ခြိုပရာကတော့ အိန်ဒိယမှာတငျ မကဘူး International ထိ ကြျောကွားတဲ့သူပေါ့.. တဈကမ်ဘာလုံးက ပရိသတျတှရေဲ့ အသဲနှလုံးကို အပိုငျသိမျးထားတဲ့သူဆိုလညျး မမှားပါဘူး (သူ့အသညျးနှလုံးကိုတော့ Nick ကအပိုငျသိမျးထား 😛 ) ။ မိတျကပျတှေ မပါတာတောငျမှ နဂိုတိုငျးလေး လှနတောမြိုးလေး…
သူလေးကတော့ မိတျကပျတှေ ဘာတှေ တဈခုမှ မလိမျးခွယျထားတဲ့ မကျြနှာပွောငျပုံတှကေို IG မှာ တငျလရှေိ့ပါတယျ။ Highway ဇာတျကားထဲမှာဆိုရငျ သူ(မ)ရဲ့ သဘာဝအလှလေးတှကေို ပရိသတျတှကေ တဝကွီး ခံစားလို့ ရခဲ့တာလေ.. ပါးခြိုငျ့လေးနဲ့ ပွုံးလိုကျရငျ မိတျကပျ ပါပါ၊မပါပါ ရငျသပျရှုမောပါပဲနျော..
Related Article>>> ဘောလိဝုဒျသရုပျဆောငျတို့ရဲ့ ဝိတျခနြညျးမြား
ဒီမငျးသမီးကတော့ အပွုံးအလှပိုငျရှငျ ဖွဈသလို ဖကျရှငျဘုရငျမလို့လညျး တငျစားလို့ ရပါတယျ။ မကျြနှာပွောငျနဲ့ဆိုလညျး အားလုံးထဲမှာ အထငျသားလှနပွေီး မိတျကပျတှေ ဘာတှေ ခွယျသလိုကျမယျ ဆိုရငျတော့ wow ပေါ့။
ဒါကတော့ နောကျထပျ ဂန်ထဝငျအလှနဲ့ Kapoor တဈယောကျပေါ့ 😀 မကျြလုံးအရောငျက အိန်ဒိယမကျြလုံးလို မကျြဆံနကျနကျ မလာဘဲ အနောကျတိုငျးသားတှလေို မကျြဆံနဲ့ အသားအရောငျ ဖြော့တော့တော့ ရှိပွီး မိသားစုထဲမှာ အထူးခွားဆုံးပါတဲ့။ မိတျကပျပါသညျဖွဈစေ မပါသညျဖွဈစေ ဘယျလိုနနေေ လှနတောတော့ အံ့သွစရာ မဟုတျဘူး ထငျပါရဲ့နျော…
ဒီမငျးသမီးကိုတော့ မွနျမာပရိသတျတှေ ကောငျးကောငျးကွီး သိကွမယျ ထငျပါတယျ။ ဟိုးအရငျ ၉၀ ကြျောကတညျးက နာမညျကွီးမငျးသမီးတဈလကျပေါ့။ Kapoor ကိုတော့ မိတျကပျမလိမျးတာတောငျ နတျသမီးလေးတဈပါးလို လှတယျဆိုပွီး တငျစားကွပါတယျ။ သူ့ခတျေသူ့အခါတုနျးက ဖကျရှငျကှငျးပေါ့… ဒီကွားထဲ တျောတျောလေး ဝသှားပွီး ခုနောကျပိုငျးမှာတော့ ယောဂဆော့ပွီး ကနျြးမာစတေဲ့ ဘဝနထေိုငျမှု ပုံစံကို ပွနျထိနျးထားပါတယျတဲ့… ပွနျလှနပွေီ ခုတော့ <3
Kung Fu Yoga နဲ့ Ms Dhoni ထဲမှာ ပါတဲ့ မငျးသမီးလေး Disha ကတော့ လှပတဲ့ အပွုံးပိုငျရှငျလေး ဖွဈတာကွောငျ့ သူ့အပွုံးတှမှော မြောသှားတဲ့သူ မြားပါတယျ။ မိတျကပျမလိမျးတာတောငျမှ မိတျကပျလိမျးထားသယောငျ ထငျရတဲ့ သူလေးပေါ့…
ယောငျးတို့ရော ဒီထဲက ဘယျမငျးသမီးကို အခဈြဆုံးလဲ???
Tags: Actresses, Bollywood, celebrity, looks, Make up, Pretty, stars, without
ကလေးငယ်တို့ အမြန်ဆုံး အိပ်ပျော်သွားစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းများ
အလုပ်လုပ်နေရင်း အိုင်ဒီယာပျောက်သွားတဲ့အခါ ဘယ်လိုဈာန်ပြန်သွင်းမလဲ
Ei Mon February 18, 2019
Taylor Swift ပြောပြတဲ့ အလှအပနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းသိမ်းနည်း လျှို့ဝှက်ချက် (၇) ချက်
Stella April 29, 2019